सरकारी कर्मचारीलाई विदाको व्यवस्था गरी पर्यटन गर्न उत्प्रेरित गर्ने अवधारणालाई “लिभ टुरिजम” भनिन्छ । दुई वर्ष अगाडिबाट पर्यटन मन्त्रालयमा शुरूप भएको यस अवधारणालाई अन्य सरकारी निकायहरूमा समेत प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने सरकारी सोच छ । सरकारले यसका लागि एक कार्यविधि बनाई अगाडि वढ्ने सोच वनाएको छ । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार कुनै पनि आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले पर्यटन मन्त्रालयबाट एक साताका लागि ६ जनाको टोली वनाउनु पर्छ र यो सुविधा वर्षको १ पटक मात्र पाईन्छ ।लिभ टुरिजम
1 ५ नेपाली कृषी वैज्ञानिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
2 नेपाल सरकारको २०७१/१/२५ अनुसार थप गरिएका नगरपालिका
4 Career News and Info जेठ १८, २०७४
6 Krinjal Space अभियान भनेको के हो ?
8 वनाक्राई ¥यानसमवेयर भनेको के हो ?
9 शीतकालिन ओलम्पिक (हिउँदे ओलम्पिक) को जानकारी
10 नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकहरु